नेपालको राजधानी काठमाडौंलाई अत्यावश्यक अग्निनियन्त्रक सवारी साधनहरु उपलब्ध गराउने ।
हाल ५० लाख काठमाडौंवासीलाई मात्रै ३ वटा अग्निनियन्त्रक दमकलले सेवा पुर्‍याई रहेकोमा‚ अमेरिकी दकमलहरुलाई हिमालयपारी काठमाडौंसम्म कुदाएर पुर्‍याउन र स्थानीय अग्निनियन्त्रण विभागलाई अनुदान दिन अन्तर्राष्ट्रिय सेलेब्रिटीहरु‚ कुटनीतिज्ञहरु र साहसिक खेलका पारखीहरु एकजुट भईरहेका छन् । निर्णायक सडक यात्रा भनेर प्रचार गरिएको यो साहसिक यात्रालाई दमकलभित्र जडान गरिएका क्यामराहरुले अभिलेख राख्नेछन् ।
यो अभियान निर्णायक सडक यात्रा जस्तो सुनिन्छ‚ तर यसको महत्व योभन्दा धेरै छ । – स्कट एच. डेलिसी‚ नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत (२०१०–२०१२) ।
नेपालका साँघुरा‚ घुमाउरा पहाडी सडकहरु विश्वकै केही चुनौतीपूर्ण र खतरनाक सडकमध्ये पर्दछन् । सडकहरुको छेऊमा १‚००० फुट गहिरा भीर र गार्ड रेल नहुनु यी सडकहरुका विशेषता हुन् । विज्ञहरुले त्यसै “मृत्युको राजमार्ग” भनेका हैनन् ।
साहसिक यात्राको प्रारम्भ
यो सन् २०१० बाट शुरु भएको हो । जेम्स ग्यान्डोल्फिनी‚ त्यतिबेलाका सबैभन्दा प्रतिष्ठित अमेरिकी अभिनेता‚ केही समय गुमनाम बस्न चाहिरहेका थिए र उनको ख्यातीबाट कतै उम्कन खोजीरहेका थिए । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत‚ स्कट एच . डेलिसीले‚ विज्ञहरुले आउने १० वर्षभित्र आउँछ भनी पूर्वानुमान गरेको‚ एउटा विनाशकारी भूकम्पका लागि नेपाली नागरिकहरुलाई तयार गर्ने महत्वाकांक्षी योजनाको आरम्भ गरेका थिए । यसैबीच‚ काठमाडौंको अग्निनियन्त्रणका प्रमुखले पनि काठमाडौं उपत्यकाका ५० लाख बासिन्दालाई सेवा पुर्‍याईरहेका पाँच वटा पुराना दमकलको संख्या बढाउन खोजीरहेका थिए । घडीनिर्माता तथा दुई पटक सगरमाथा आरोहण गरेका माईकल कोबोल्ड उनीहरु दुवैको साथी थिए र उनैले यो दमकल अभियानको परिकल्पना अघि सारे ।
“सन् २०१३ को ग्रीष्म ऋतुमा जीम ग्यान्डोल्फिनीको मृत्युपछि‚ मैले अभियानको योजना थाँती राखें‚” कोबोल्ड सुनाए । कोबोल्डले अप्रिल १‚ २०१५ मा सोरवे फाउन्डेसन स्थापना गरे र भूकम्प आएको अवस्थामा यसले नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तीन सातापछि‚ अप्रिल २५ मा‚ करिब १०‚००० को ज्यान लिने र दश लाखभन्दा बढी घर भत्काउने गरी नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै दुई पटक भूकम्प गयो ।
अभियानको आधारभूत काम गरेपछि‚ अन्तिम प्रबन्ध मिलाउन कोबोल्ड सेप्टेम्बर २०१५ मा नेपाल आए । बितेको ६ महिनायता सावधानीपूर्वक गरिएका सबै वार्ताहरुलाई एउटा नयाँ बाधाले निमिट्यान्न पार्‍यो : नेपाल र भारतबीचको विवादका कारण भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगायो‚ सम्पूर्ण ढुवानी ठप्प भयो । यसमा दमकल पनि पर्‍यो । “आधारभूत रुपमा‚ हाम्रा सबै योजनाहरु भताभुङ्ग भए‚” तीन पटकसम्म अमेरिकी राजदूत बनेका‚ हाल अवकाशप्राप्त र सोरवे फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक रहेका स्कट डेलिसीले स्मरण गरे । त्यसपछि‚ कोबोल्ड नेपालमा २१ महिना बसेर ‚ एकपछि अर्को नेपाली सरकारसँग सावधानीपूर्वक वार्तालाई फेरी अघि बढाए । सन् २०१७ को मध्यतिर‚ लाखौं अमेरिकी डलर बराबरको आयात कर छु६ प्रमाणपत्र लगायत आधिकारिक अनुमतिपत्र अन्तत : उपलब्ध गराईयो । यो अभियानले काठमाडौंको वारुण सेवाको वर्तमान श्रोतलाई तेब्बर बनाउनेछ ।
श्रेणी १ पुरस्कार – ने रु १००
अभियानको कन्तुरका लागि ने रु १०० सहयोग गर्नुहोस्